Ọ bụghị naanị maka ngwongwo mmekọahụ: maka obi ụtọ nke mmadụ abụọ, bido na bọọlụ nke ịda mbà Yin
1. Ọkpụkpụ afọ n'ala Pelvic arụrụ nwanyị N'ọkpụkpụ mgbatị na-apụtakarị n'etiti ndị agadi na ndị agadi nwanyị mụrụ nwa. N'ihi ihe dị iche iche na-eme ka ọkpụkpụ pelvic ghara ịdị na-arụ ọrụ, ihe mgbaàmà ahụ dịgasị iche iche, gụnyere ihe mgbaàmà nke urinary tract, dị ka urination ugboro ugboro, ngwa ngwa nke ...
Etu esi họrọ vibrator kwesịrị ekwesị
Akụkụ na-akpali akpali dị mkpa Dịka iji ntị nwere ntị, ma ọ bụ jiri nkuku dị nkọ, adịghị achọ! Ugbu a ụdị ndị a na-ahụkarị n'ahịa bụ antennae urukurubụba, obere a beụ, obere rabbits na ihe ndị ọzọ, na ụdị akwụkwọ ndị ọzọ bụ ọdịdị ifuru, ọdịdị onye ofufe na ihe ndị ọzọ. Shape ị họọrọ dị ka ...
Etu esi eji ma jigide vibrator maka imetọ onwe nwanyị
Ọrụ usoro A na-eme vibrator, nke a makwaara dị ka ihe arụ ọrụ arụ ọtụtụ ọrụ, iji imitateomie ntinye na ntinye nke nwoke Yinjing. Enwere ike iweghasị ahụ vibrator n'ime 1-3cm, ụdị dị iche iche jikọtara ọrụ dị iche iche dịka mkpali vulva, ịwụ elu akwa, ntụgharị bead ...